Australia Myanmar Youth Community FM Loading ...
| Po.Box 1141 , Strathfield Nsw 2135 , Sydney , Australia Now playing: Loading ...
Australia Myanmar Youth Community FM ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့် ကြိုဆိုပါ၏။ We realize that entertainment isabroad concept that embodies tons of different things that entertains us. We provide you with the best entertainment radio online,
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသော ကြိုးစာမှုများဖြင့် အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည် အစီအစဉ်ကောင်းများကို ကြိုးစား စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိရာမှာ တေးသီချင်း ကဏ္ဍတွင် မြန်မာ သံတေးများ ၊ စတီရီယိုတေးများ (Music Bank) ၊ Rock သီချင်းများ ၊ Hip Hop တေးများ ၊ နိုင်ငံတကာတေးသီချင်းများ (Blend of Music) .နှင့် Evening အစီအစဉ်မှ တေးသီချင်း ကောင်းများစွာကို ရွေးချယ် ထုတ်လွှင့် ပေးလျက် ရှိပါ သည်။ ထို့အပြင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ၊ စိတ်နှလုံးဘ၀င်ရွှင်လန်းစေမည့် အစီအစဉ်ပေါင်း များစွာ ကိုလည်း တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးရလေအောင် စီစဉ် ထုတ်လွှင့် တင်ဆက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။
Feed not found	EDU Uni cuts aren't clever, but merit in new uni equity and work placement measures
Report says study can't be used to measure changes in uni costs
Universities are productive infrastructure to grow the economy
Universities Australia welcomes new ARC appointment
Unis & students have done their bit for budget repair: almost $4 billion since 2011
Australia's universities remain open to the world's best minds
New visa rules must ensure Australia's universities remain open to the world
Copyright © 2017. Australia Myanmar Youth Community FM .
Powered By GTR You are using Internet Explorer 8.0 or older to view the web.	Due to security risks andalack of support for web standards this website does not support your version of IE. Please upgrade toanewer browser to fully enjoy this site and the rest of the web. After you update, please come back and you will be able to view our site.	Upgrade